Le Journal du 04 Mai 2022 - Studio Sifaka - Actu, musique, conseils et débats pour les jeunes à Madagascar
A la maison des jeunes Fénerive Est
Le Journal du 04 Mai 2022
- Vidin’ny lavanila : mitotongana hatrany.
- E-taray : rafitra iray manampy ny olom-pirenena sy ny mpanao gazety amin’ny fampiasana ny nomerika.
- Maison des jeunes Fénerive-Est: manampy ireo tanora hiaro-tena amin’ny VIH/SIDA.
- Fisondrotan-karama: hampitombo ny fandaniana ara-tsakafo no betsaka.
- Tsinjo ny ho avy : Tetikasana tanora mikendry ny fahadiovan’ny tanànan’i Moramanga.
Studio Sifaka · 2022-05-04 NY VAOVAO